CAAWA COLTANKU CIYAAR KA BADAN: Imisa ayuu waayayaa Talyaanigu haddii uu ka haro Koobka Adduunka 2018? – Gool FM
(Roma) 13 Nof 2017 – Gegada caanka ah ee San Siro waxaa caawa taagan tareenka ugu dambeeya ee ay Talyaanigu u raaci karaan Russia 2018, balse waa haddii ay gacanta ku dhigaan tigidh qura ee dhex yaalla iyaga iyo Sweden, waxaa sidoo kale aayihiisa u ciyaaraya macallinka lagu kacsan yahay ee Ventura.
Yeelkeede, qadiyadda la isku hayaa way ka qara wayn tahay qaran usoo baxa Koobka Adduunka, balse waxaa meesha yaalla kharash lacageed oo qaadasho u baahan, tusaale ahaan haddii uu Talyaanigu ka haro Koobka Adduunka wuxuu xiriirka FIGC waayayaa lacago kasoo geli lahaa iidheh, funaanado iibin, xuquuqo TV, dakhli canshuureed, lacagaha FIFA iyo abaalmarinno kale, sidaa darteed, meesha ma taallo guuldarro ciyaareed ee waxaa sidoo kale jirta khasaare maaliyadeed.
Haddii aan sii faahfaafinno, Talyaaniga ayaa iidhehda kaliya ku waynaya 10 milyan oo euro, waxaa dheer lacagaha uu ka qaato iibinta funaanadaha xulka oo uu boqolleey ku leeyahay PUMA, kaliya abaalmarinta FIFA ayaa iyaduna ah $ 9.5 milyan xulkii ku hara guruubyada, halka uu $ 38 milyan oo doollar jeebka gashanayo xulkii koobka qaada.
Dhanka kale, Koobka Adduunka ayaa laftiisu dhanka TV-yada hoos u dhac ku imanayaa haddii uu ka maqnaado Talyaanigu, haddii uu Talyaanigu haro waxaa sidoo kale lacag ay heli lahayd waayaysa dowladda Talyaaniga taasoo ka dhigan dhibaato dhinacyo badan leh sidaa darteed caawa San Siro waxay Talyaanigu ku ciyaarayaan ka badan ciyaar caadi ah.
CIYAARTA QOYSKA: ''Xaaskayga Swedish-ka ah lama hadlin tan iyo Jimcihii'' - Davide Ballardini